Xiriirka Caalamiga ee Warfidiyeenka oo ugu baaqay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya inuu ixtiraamo xorriyadda saxaafadda
Xiriirka Caalamiga ee Warfidiyeenka dunida (International Federation of Journalists) loona soo gaabiyo IFJ ayaa ugu baaqay Soomaaliya inay ku xoojiso distuurkeeda Qaranka iyo sharcigeeda saxaafadda qodobo damaanad-qaadaya xorriyadda saxaafadda. Xiriirku, waxa uu tilmaamay baahi degdeg ah in loo qabo in la hagaajiyo heerka xorriyadda saxaafadda.
War Saxaafadeed uu shalay soo saaray Aidan White oo ah Xoghayaha Guud ee IFJ, waxa uu ku yiri "Dadka Soomaalidu waa inay ka soo kabsadaan afar iyo toban sano oo ay argagixinayeen maliishiyooyinka hubeysan ee waddanka jooga, waana inay u dhaqaaqaan dhinaca dimoqraadiyadda, halkaasoo ay jirto ixtiraam ku jeeda xorriyadda saxaafadda iyo hadalka."
Waxa uu si gaar ah u weydiistay Madaxweynaha cusub inuu ixtiraamo xorriyadda hadalka, si ay ugu sahlanaato inay ka qayb qaataan suxufiyiinta xirfadleyaasha ah doodaha la xiriira tallaabooyinka saxaafadda cusub. IFJ, waxa ay xuseen inay raacayaan bayaanka ka soo baxay SOJON oo ah urur suxufiyiin Soomaali ah oo lamaane la ah IFJ iyo ururada kale ee xuquuqda aadanaha iyo saxaafadda.
"Waxaan soo dhoweynaynaa baaqa suxufiyiinta iyo kooxaha bulshada rayidka si loo difaaco, loona xoojiyo xorriyadda hadalka ee Soomaaliya" ayuu yiri White. "Waxaan taageereynaa sheegashadooda iyo baaqooda la xiriira in la joojiyo faafreebka tooska ah iyo kan aan tooska ahayn."
Dhanka kale, Bernard Ginet oo ah Agaasimaha mashruucyada IFJ aan kula kulmay xafiiskiisa usbuucii hore ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay xiriir ahaan uga difaacaan suxufiyiinta Soomaalida wax kasta oo halis gelin kara howlahooda. IFJ, waxa ay aaminsan tahay ayuu yiri in la helo mabaa'dii aasaasi ah oo lagu adkeynayo xorriyadda hadalka Soomaaliya.